Worship and Liturgy - Mandalay Catholic Archdiocese
Commission on Worship, Liturgy, Devotion, Feast and Rituals
၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ သဒ္ဓါကြည်ညိုခြင်း၊ ၀ိနည်းနှင့့်် ပွဲတော်များကျင်းပရေး ကော်မရှင်
A worshiping community of the Archdiocese of Mandalay, participating in the active liturgical celebration asasource and summit of Christian life in preparation foradeeper encounter with God in praise and worship to achieve the goal of spiritually successful people of God.
All the believers of Archdiocese of Mandalay are to become united people of God by living the divine word of God, prayerful life, the personal holiness of our daily life. We, the Commission on Worship, Liturgy, Devotion, Feast and Rituals, therefore commit ourselves to promote active participation in sacramental life fulfilling the followings:
1) deligent preparation for sacred liturgy,
2) providing liturgical courses for integrated meaning of the liturgical celebration,
3) creating opportunity to participate sharing an interest of liturgy,
4) providing means and ways to promote local inculturation with the needs of the local people,
5) updating the quality liturgy throughameaningful life.
၁။ ဆရာတော်ကြီးများ၊ ရဟန်းတော်များ၊ ကိုရင်၊ သီလရှင်၊ ဓမ္မဆရာ၊ များစွာသောဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများ
၂။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့
၁။ ၀တ်ပြုဆုတောင်းရန်နှင့် စုရုံးရန်နေရာများရှိသည်
၂။ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ တူရိယာများ
၁) သင်တန်းများနှင့် Seminars အတွက် အခါအားလျော်စွာ (သို့) အချိန်ပိုင်းသင်တန်းမှူးများရှိသည်။
၂။ ကျွမ်းကျင်မှုပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းမှုကြောင့်၊ အသိတရားနည်းပါး၍ စိတ်ပါဝင်စားမှု မရှိခြင်း။
၃။ ဦးပဇ္စင်းများ၊ ဘာသာတူအမှုတော်ဆောင်များ၊ ကျမ်းစာဖတ်၊ ယဇ်ပလ္လင်အမှုတော်ဆောင်များအား သူ့နေရာ နှင့်သူ နေရာမပေးတတ်ခြင်း၊
၄။ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော သီချင်းဆိုအဖွဲ့၊ တရားထောက်များ၊ ဘုရားစင်ပြင်သူများ မရှိခြင်း၊
၅။ ကျမ်းစာဖတ်စင်အား အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊
၁။ အသင်းတော်မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာသော နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း၊ ကြေငြာချက်စာတမ်း
၂။ ဘာသာရေးစာအုပ်စာပေ၊ မွမ်းမံသင်တန်း၊ ကျမ်းစာသင်တန်း
၁။ သင့်တော်၊ ဆီလျော်သောဝတ်ပြုရန်နေရာမရှိခြင်း
၂။ အလှူရှင်နှင့် အလှူငွေများ မရှိခြင်း
၁။ မန္တလေးသာသနာအတွင်းရှိ ဘာသာဝင်များ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌ ကြည်ညိုသဒ္ဓါတရား တိုးပွားစေခြင်း၊ ပြည့်ဝသော အသက်တာ၌ ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်များကို သက်သေခံနိုင်စွမ်းရှိစေရန်။
၂။ ဘာသာရေးအနှစ်သာရများ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်း၌ထည့်သွင်းကိန်းအောင်းစေရန်၊ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းများ၌ မြန်မာမှု၊ ယဉ်ကျေးမှု ကျင့်စဉ်များနှင့်အညီ ဘာသာရေး အခမ်းအနားများ၌ အသုံးပြုသွားရန်။
၃။ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအမှု၌ လမ်းညွှန်ဦးဆောင်နိုင်သော Liturgical Animators မွေးထုတ်ပေးရန်နှင့် ဆင့်ပွားသင်တန်းများပေးကာ အမွေအနှစ်များ ခံယူရရှိစေရန်။
၄။ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော စာချွန်တော်၊ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများကို ယုံကြည်သူများအတွက် ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေရန်။
၅။ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကော်မရှင်နှင့် လုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေများ စုဆောင်းကောက်ခံရန်။
Lines Of Action (အကောင်အတည်ဖေါ် လုပ်ဆောင်ချက်များ)
၁။ မန္တလေးသာသနာအတွင်းရှိ ဘာသာဝင်များ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌ စိတ်အားထက်သန်စွာ ပါဝင်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပြည့်ဝသောအသက်တာကို ရှင်သန်စေပြီး ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်များကို လူများအရှေ့ ၌ သက်သေခံနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ - ဆရာတော်ကြီး၊ ကော်မရှင်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် အဖွဲ့သားများ
ဦးဆောင်အဖွဲ့ - လှုံ့ဆော်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးများ
လျာထားချက်ရလဒ် - ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌ ကြည်ညိုသဒ္ဓါတရားပွားများနိုင်ပြီး ဘုရားရှင်ကို သက်သေခံနိုင်ကြမည်။
လက်တွဲလုပ်ဆောင်သူများ - သာမန်ဘာသာဝင်အဖွဲ့၊ ပုံသွင်းလေ့ကျင့်ပေးသောအဖွဲ့၊ှငါညငျ
အကောင်အထည်ဖော်မည့်ကာလ - ဇွန်လ ၂၀၀၇ - ဇွန်လ ၂၀၁၂
၂။ ဒေသခံဘာသာဝင်များ လက်ခံနိုင်သော မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများကို ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ဘာသာရေးအခမ်းနားများ၌ ထည့်သွင်းကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် ဘာသာရေးအနှစ်သာရကို လူတို့၏ နှလုံးသားတိုင်း၌ ထည့်သွင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ - ကော်မရှင်အဖွဲ့
ဦးဆောင်အဖွဲ့ - ကော်မရှင်အဖွဲ့သားများနှင့် ကိုးကွယ်မှုဘာသာတရားများ အချင်းချင်းနှီးနှောဖလှယ်ခြင်းနှင့် မြန်မာမှုပြုခြင်းကော်မရှင်
လျာထားချက်ရလဒ် - မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အညီ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်တတ်ခြင်း
လက်တွဲလုပ်ဆောင်သူများ - ကိုးကွယ်မှုဘာသာတရားများ အချင်းချင်းနှီးနှောဖလှယ်ခြင်းနှင့် မြန်မာမှုပြုခြင်းကော်မရှင်၊ သာမာန်ဘာသာဝင်များ၊ဆက်ကပ်ပါဝင်မှုကော်မရှင်၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးများ
အကောင်ထည်ဖော်မည့်ကာလ - ဇွန်လ ၂၀၀၇ မှ ဇွန်လ ၂၀၀၁၂ ထိ
၃။ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်၌ ကျွန်ုပ်တို့ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များသည် ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း ပညာရပ်၌ ကျွမ်းကျင်သူများ ပေါ်ထွက်လာနိုင်ရန် စွမ်းစွမ်းတမံကြိုးစားဆောင်ရွက်ပြီး စိတ်ဝင်စား သူများ၊ အသိတရားကြွယ်ဝသူများကို ဆင့်ပွားမွေးထုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် - ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့
ဦးဆောင်အဖွဲ့ - ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဒေသခံကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဧည့်သည်တော်လူ့အရင်းအမြစ်များ
လျာထားချက်ရလဒ် - ပညာရှင်များနှင့် အသိတရားဗဟုသုတကြွယ်ဝသူများပေါ်ထွန်း၍ ဆက်လက်တိုးပွားလာမည်။
လက်တွဲလုပ်ဆောင်သူများ - ဒေသခံသာသနာအုပ်စုများနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ
အကောင်ထည်ဖော်မည့်ကာလ - ဇွန်လ ၂၀၀၇ မှ ဇွန်လ ၂၀၀၁၂ အထိ
၄။ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အသင်းတော်မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည့် နောက်ဆုံးပေါ် သတင်းအချက်အလက်၊ စာချွန်တော်များကို ရဟန်းတော်များ၊ သီလရှင်များနှင့် ဘာသာဝင်များဆီသို့ အမြန်ဆုံးပို့ပေးနိုင်မည်
တာဝန်ခံ - ကော်မရှင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
ဦးဆောင်အဖွဲ့ - ကော်မရှင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ
လျာထားချက် - မှားယွင်းသောအယူဝါဒများကိုရှောင်၍ အသင်းတော်၏သွန်သင်ချက်များနှင့်အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌ တက်ကြွစွာ ပါဝင်နိုင်မည်။
လက်တွဲလုပ်ဆောင်သူများ - ပုံသွင်းလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရေးအဖွဲ့၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အာဗွီအေ
အကောင်အထည်ဖော်မည့်ကာလ - ဇွန်လ ၂၀၀၇ မှ ဇွန်လ ၂၀၁၂
၅။ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကော်မရှင်အဖွဲ့အတွက် လိုအပ်သောရံပုံငွေကို စေတနာရှင်အလှူရှင်များထံမှ၎င်းင်း၊ သာသနာစီရင် အုပ်စုတိုင်းမှ၎င်းင်း ကောက်ခံစုဆောင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
တာဝန်ခံ - ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ
ဦးဆောင်အဖွဲ့ - ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးများ
လျာထားချက်ရလဒ် - ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ဘာသာရေးစာအုပ်စာပေများကို ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဝေနိုင်ပြီး သင်တန်းများပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လက်တွဲလုပ်ဆောင်သူများ - ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် အလှူရှင်များ
အကောင်အထည်မည့်ကာလ - ဇွန်လ ၂၀၀၇ မှ ဇွန်လ ၂၀၁၂